Ugu yaraan 135 qof oo ku dhimatay daadadka India | Star FM
Home Caalamka Ugu yaraan 135 qof oo ku dhimatay daadadka India
Ugu yaraan 135 qof oo ku dhimatay daadadka India
Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay in in ka badan 135 qof ay ku dhinteen wadanka India .
Tani ayaa timid ka dib markii daadad iyo dhul go’o ay ka dhasheen roobab culus oo halkaasi ka da’ay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in kooxaha samata bixinta ay weli raadinayaan dad la la’yahay.
Tani iyo Khamiistii ayay roobab ka da’ayeen xeebta galbeed ee India iyadoo waaxda saadaasha hawada ee wadankaasi ay ka digtay in roobabku ay sii socon doonaan maalmaha nagu soo aaddan.
Gobolka Maharashtra keliya waxaa ku dhintay 114 ruux oo ay ka mid yihiin in ka badan 40 uu dhulku la go’ay.
Previous articleXildhibaankii hore ee bartamaha Imenti oo geeriyooday
Next articleKoonfur Galbeed oo magacowday guddiga doorashada ee aqalka sare